လူပျိုကြီး နဲ့ အပျိုကြီးတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို လူပျိုကြီး နဲ့ အပျိုကြီးတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို လူပျိုကြီး နဲ့ အပျိုကြီးတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို လူပျိုကြီး နဲ့ အပျိုကြီးတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို လူပျိုကြီး နဲ့ အပျိုကြီးတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို …
ကားမှန်ခွဲပီး ခိုးခံလိုက်ရတဲ့ငွေတေနဲ့ပတ်သက်ပီး ပန်ဆယ်လို ရှင်းပီ မနက်က San Francisco ကို သွားရင်း Public Parking မှာ သေးဆင်းပေါက်မိတာ ကားမှန်ခွဲခံလိုက်ရတယ်။ အမေရိကရဲ့ Very First Experience ဆိုတော့ အတော်လန့်သွားတယ်။ ငါးမိနစ်လောက် ကားနားမရှိတဲ့အချိန်လေးမှာကို လုပ်သွားတာ။ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး ပါသွားတယ်။ ငွေသားမကိုင်တဲ့ နိုင်ငံမို့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ဒေါ်လာ၂၀၀ မပြည့်တပြည့်ရယ်၊ …
မော်လမြိုင်မြို့ ဦးဇိနဘုရားမှာပြတဲ့ နမိတ် see more….. အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို မော်လမြိုင်မြို့ ဦးဇိနဘုရားမှာပြတဲ့ နမိတ် see more….. အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို မော်လမြိုင်မြို့ ဦးဇိနဘုရားမှာပြတဲ့ နမိတ် see more….. အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို မော်လမြိုင်မြို့ ဦးဇိနဘုရားမှာပြတဲ့ နမိတ် see more….. အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို မော်လမြိုင်မြို့ ဦးဇိနဘုရားမှာပြတဲ့ …
ညစာအတူစားရအောင်ဆိုပြီး ပုရိသတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်… ခရက်ဒစ်ဗီဒီယ်ို ညစာအတူစားရအောင်ဆိုပြီး ပုရိသတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်… ခရက်ဒစ်ဗီဒီယ်ို ညစာအတူစားရအောင်ဆိုပြီး ပုရိသတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်… ခရက်ဒစ်ဗီဒီယ်ို ညစာအတူစားရအောင်ဆိုပြီး ပုရိသတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်… ခရက်ဒစ်ဗီဒီယ်ို ညစာအတူစားရအောင်ဆိုပြီး ပုရိသတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ…. အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်… …
အာဆီယံ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်လိုက်ပြီ အခုတက်လာတဲ့သတင်း မယုံနိုင်ဘူး
အာဆီယံ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်လိုက်ပြီ အခုတက်လာတဲ့သတင်း မယုံနိုင်ဘူး အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို အာဆီယံ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်လိုက်ပြီ အခုတက်လာတဲ့သတင်း မယုံနိုင်ဘူး အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို အာဆီယံ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်လိုက်ပြီ အခုတက်လာတဲ့သတင်း မယုံနိုင်ဘူး အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို အာဆီယံ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်လိုက်ပြီ အခုတက်လာတဲ့သတင်း မယုံနိုင်ဘူး အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို အာဆီယံ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်လိုက်ပြီ အခုတက်လာတဲ့သတင်း မယုံနိုင်ဘူး အောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို …
အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှု့ သူဦးရေ5သိန်း ကျော်သွားတဲ့ သာမဏေကျော် နှစ်ပါးရဲ့ လက်စွမ်း
အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှု့ သူဦးရေ5သိန်း ကျော်သွားတဲ့ သာမဏေကျော် နှစ်ပါးရဲ့ လက်စွမ်း အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှု့ သူဦးရေ5သိန်း ကျော်သွားတဲ့ သာမဏေကျော် နှစ်ပါးရဲ့ လက်စွမ်းဒီဗွီယိုဖိုင်လေးဟာ ဆိုရင်လည်း ကြည့်ရှု့ သူဦးရေ5သိန်း ကျော်သွာခဲ့ပီဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက အခြားသော တီးမှုတ်သူတို့မှာ လူကြီးများဖြစ်ပီး မောင်းဆိုင်းတီးခတ် သူမှာတော့67 …
(၈)နှစ်အရွယ် ၂ တန်းကျောင်းသူလေးကို အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ်ကောင်လေးနဲ့ (၃၂)နှစ်အရွယ်တို့မှ သရေကွင်းပြစ်တမ်း ကစားရန်ဆိုပြီး… See more
(၈)နှစ်အရွယ် ၂ တန်းကျောင်းသူလေးကို အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ်ကောင်လေးနဲ့ (၃၂)နှစ်အရွယ်တို့မှ သရေကွင်းပြစ်တမ်း ကစားရန်ဆိုပြီး… See more တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပုလောမြို့နယ် စက်တော်ရာကျေးရွာ၌ွသက်ငယ်မဒိန်းပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။ဖြစ်စဉ်မှာ ပုလောမြို့နယ် “ကြဲ”ကျေးရွာအုပ်စု စက်တော်ရာကျေးရွာတွင် မ(……………) အသက် (၈)နှစ်၊ ဒုတိယတန်းကျောင်းသူသည် ယမန်နေ့က တရွာတည်းနေ သူငယ်ချင်းများနှင့် နေအိမ်နောက်ဖက်တွင် ကစားနေစဉ် မ(…………..) နှင့် ကလေးများကို …
မဲခေါင်မြစ်ထဲကနေ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေချိုငါးလိပ်ကျောက်ကြီးကို…see more
မဲခေါင်မြစ်ထဲကနေ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေချိုငါးလိပ်ကျောက်ကြီးကို…see more မဲခေါင်မြစ်ထဲကနေ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ ငါးလိပ်ကျောက်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေချိုငါးဖြစ်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ၁၃ ပေ ရှည်လျားပြီး အလေးချိန် ၆၆၁ ပေါင်ရှိတဲ့ ငါးလိပ်ကျောက်ကြီးကို ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘောဒီးယားတံငါသည်တစ်ဦးက ဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ မဲခေါင်မြစ်ထဲကနေ ငါးအကြီးကြီးတွေ၊ မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်မယ့် အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ ငါးတွေ ဖမ်းမိရင် သူတို့ကို …